Ukukhwehlela - into okuyinto umzimba womuntu eningi kabi, ukucasuka ubuhlungu. Inqubo ukukhwehlela - isenzo reflex kubangelwa ukucasuka we nolwelwesi lwamafinyila umgudu wokuphefumula. Izimbangela ukukhwehlela kungaba zahlukahlukene kakhulu, kodwa ezivamile: komzimba, imikhuhlane izifo ezibangelwa amagciwane kanye ukuvuvukala umgudu wokuphefumula.
Khwehlela isiraphu "Pheka"
I isiraphu kubhekwa usuyinto inhlanganisela izidakamizwa equkethe izinto Lokudabuka isitshalo. Lesi sidakamizwa has imisebenzi eminingi: aqede ukhwehlela, expectoration izimbangela, kunciphisa nokuvuvukala, futhi Ubuye umsebenzi sine. Kusho ubhekana zonke izinhlobo ukukhwehlela.
Ukulungiswa iqukethe izithako ngempumelelo asebenzayo uyakwazi ukunciphisa ukushisa, kanye banezimfanelo izakhiwo diaphoretic futhi spasmolytic. Isiraphu "Pheka" lisetshenzisiwe nangokuqondene njengoba isisu futhi, sine.
Ngenxa izakhiwo expectorant izinto eziqukethwe isiraphu kuyinto phlegm omkhulu futhi ubonisa it ngokwandisa umsebenzi izinwele EPITHELIAL asesibelethweni yomoya.
I anezakhi ezikhethekile zomuthi kusiza ukuba ubhekane nezingcindezi ukuvuvukala bronchi.
Isiraphu "Pheka" ngokuvamile lisetshenziselwa ukwelapha izimpawu ukukhwehlela izifo ezibangelwa amagciwane kanye esithathelanayo imvelaphi ezahlukene. Ezimweni eziningi, umuthi kuboniswa nokuvimbela ukukhwehlela somoya futhi zokuphefumula ipheshana izifo.
Umuthi nakhona liqokwa udokotela ukuze ube usizo ekwelapheni izifo ezifana namathansela, pharyngitis kanye rhinitis.
Isiraphu "Pheka" is kahle kungase kutholakale ababhema "professional", kanye namafomu eziseqophelweni laryngitis.
Isiraphu "Pheka" imfundo manual uchaza indlela izidakamizwa ukuze uyiswe ngomlomo. Kulokhu, udinga ukuyisebenzisa njengoba injalo emsulwa, ngaphandle diluting nge namanzi noma olunye uketshezi. Ukusetshenziswa isiraphu akuxhomekile ukudla.
Phakathi reception we ketshezi ngalinye kumele libe okungenani amahora ayisithupha. Nokho, asikho isidingo ukuzithiba medicate. Isikhathi course, kanye nenani izikhathi ngosuku ngeke ukucacisa udokotela ngesikhathi luhlolo.
Ngokuvamile, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-eziyisithupha ubudala kufanele baphuze 2.5 ml isiraphu kathathu ngosuku. Izingane eqenjini yobudala nambili ukuba ezintathu kuphela bentando ngosuku 5 ml. Intsha kanye nabantu abadala umthamo kufanele senyukela 10 ml.
Isiraphu "Pheka" Odokotela batusa kakhulu ukupha izingane ezingaphansi kweminyaka engu-unyaka owodwa.
Ngokuvamile, isikhathi ukwelashwa sifundo isonto elilodwa. Nokho, kunokuningi okungakhulunywanga ngakho. Ngaphambi kokuqala ukusebenzisa izidakamizwa kufanele uxhumane nodokotela wakho.
Imininingwane Scientific ekusetshenzisweni ngokweqile zomuthi alikho, kodwa musa ukwandisa umthamo ngamabomu. Akekho owaziyo ukuthi esiningi ngokweqile ezisebenzayo sizosebenza emzimbeni wakho. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izingane ezincane.
Kungakhathaliseki ukuthi kukhona side effects
"C. Cook," ukukhwehlela isiraphu inhlukano uchaza njengenhlangano izidakamizwa ngempumelelo, kodwa ngisho naye kukhona eziningi Izimo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ukusetshenziswa imithi kufanele uwafunde.
Ngokuvamile lokhu muthi kahle ikubekezelele zonke iziguli futhi ubhekana yemfanelo yayo. Nokho, iziguli nge hypersensitivity kuya izingxenye ezithile ze-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile izidakamizwa zingaqala. Uma ukusabela okunjalo kuyagcinwa, ke ukusetshenziswa kwezidakamizwa kudingeka ngokushesha ayeke futhi esikhundleni salo omunye.
Ukwakheka izidakamizwa kufakwe licorice impande, ukuthi ukusetshenziswa eside kungaba uphatheke kabi amanzi electrolyte ibhalansi. Ngakho-ke, kukhona ingozi edema kanye hypokalemia.
Isiraphu "Pheka" izingane kanye nabantu abadala enezinto eziningi Izimo ezidinga kucatshangelwe uma usebenzisa izidakamizwa.
Umuthi is hhayi Kunconywa uma kukhona ukuzwela ethile okungenani eyodwa yezingxenye.
Buyisela isiraphu omunye ebukhoneni sikashukela, izifo kwesibindi nezinso, umfutho wegazi ophakeme emithanjeni, futhi ebukhoneni isisindo esikhulu ngokweqile.
Kunoma ikuphi it is hhayi Kunconywa ukunikeza izingane isiraphu enyakeni owodwa. Ukusebenzisa izidakamizwa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu eziyisithupha emi ngokucophelela okukhulu ngaphansi kolawulo esiqinile.
Futhi banake izifo ezifana ukuvuvukala uhlelo hepatobiliary. Kulokhu, lesi sidakamizwa kuyinto efiselekayo esikhundleni nezinye.
Kufanele kusetshenziswe hhayi ukukhwehlela isiraphu kwabesifazane abakhulelwe kanye lactating kanye izakhiwo zomuthi phakathi nokukhulelwa kanye lactation ezingazange wafunda ngochwepheshe.
Ungayisebenzisi isiraphu "Pheka", kanye nezinye izidakamizwa antitussive. Lokhu kuthiwa kubangelwa, namaphilisi inciphise isikhwehlela ethakwa.
Phakathi nocwaningo ke kwaphawuleka ukuthi le mithi iphumelele kakhudlwana ukukhwehlela isiraphu kambalwa. Nokho, futhi kulesi simo-ke akudingekile ukuba bazibuse, bangabuswa.
Nakani ingozi hypokalemia nge coadministration zomuthi ne laxative, isisu namanxusa antiarrhythmic.
Isiraphu "Pheka" ubhekwa ukulungiselela eziyinkimbinkimbi, ukuqeda zonke izinhlobo ukukhwehlela.
Ingxenye knapweed engcwele ukwehlisa ukushisa, futhi wenza umsebenzi diaphoretic, expectorant kanye isisu.
Vasak kunciphisa isikhwehlela viscosity futhi kusiza ukuba kususwe, enza umsebenzi i expectorant.
Kulindzhana futhi ukhiqiza isinyathelo expectorant. Senza isisu tonic umsebenzi antihelminthic.
Licorice impande kususa ukushisa, kususa ukuvuvukala has umphumela antispasmodic.
Ingxenye kweminti neruwe ensimini wenza analgesic, tonic umsebenzi opholile. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-imikhuhlane.
Isiraphu "Pheka", ukubuyekezwa mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungafunda kulesi sihloko - ithuluzi eliphumelelayo futhi kungase kutholakale kokusisiza ukuba sibhekane nesimo ne ukukhwehlela etiologies ehlukahlukene. Iziguli ukusebenzisa lolu imithi ngesikhathi imikhuhlane, imiphumela emihle ingabe waphawula ezinsukwini ezimbalwa. kancane kancane kukhwehlela ubalekela njengoba ezinye izimpawu komkhuhlane.
Imiphumela emihle babonakala ngesikhathi ekwelapheni ukukhwehlela ezinganeni. Nokho, ezinye izidakamizwa ziye isetshenziswe.
Imiphumela esheshayo yabonisa ukusetshenziswa elihlangene isiraphu "Pheka" ngemithi elwa namagciwane. Ukukhwehlela anakekele ngokugcwele ukuphila ngazo izinsuku eziningana.
Nokho, asikho isidingo ukuzithiba medicate. Phela, ukuze ukwazi ukwenza umonakalo ongalungiseki emzimbeni wakho.
Hepatoprotectors - izidakamizwa sokuvikelwa isibindi
Sleeping amaphilisi ukulala - omunye izindlela zokunqanda ukuqwasha
Valentine ngezandla zakhe kusukela indwangu: okuyinhloko ekilasini, iphethini, isithombe